အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မည့် Forex Trade တစ်ခုကို ဘယ်လိုရအောင်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာ ဒီသင်တန်းမှာ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနယ်ဝေးကနေ Forex Trade ကို မြန်မာဘာသာနဲ့လေ့လာလိုသူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
We are happy to return to Myanmar again to meet friends and holdaworkshop.
Are you Planning to study abroad? Wall Street English cares about you. Trusting WSE isasurefire way to improve your English skills in the shortest amount of time. AT WSE, You will study in Encounter Classes with our internationally certified native English speaking teachers. No more missing classes. Our Flexible Scheduling ensures that classes are offered when you are free and provides busy adults with the ability to adjust their classes to their schedule. At Wall Street English, we design all of our facilities with modern multimedia outlets and staff them with English speakers who will make you feel as if you are in the modern english speaking world. We care about you as an individual learner and believe small class sizes contribute toastudent's success. All of our classes have on average of four students- all at the same level as you. This way you will feel more comfortable to speak English and in the process, are bound to make new memories and friends. #WallStreetEnglish #WSEMyanmar
တဈကမ်ဘာလုံးမှာ လူသုံးအမြားဆုံး ဘာသာစကားက အင်ျဂလိပျစာမဟုတျဘူးဆိုရငျ ဘာဖွဈမလဲ? နိုငျငံတိုငျးမှာ ဘာသာစကားသုံးစှဲတဲ့လူဦးရပေျေါမူတညျပွီး ခှဲထားတဲ့စာရငျးအရဆိုရငျ 1. တရုတျ (1.1 ဘီလီယံ) 2. အင်ျဂလိပျ (983 မီလီယံ) 3. ဟိန်ဒူ (544 မီလီယံ) 4. စပိနျ (537 မီလီယံ) 5. အာရဗေဈ (422 မီလီယံ) တို့က ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ လူအမြားဆုံးသုံးနကွေတဲ့ဘာသာစကားတှပေါ။ ဒါ့အပွငျ ဘာသာစကားတဈမြိုးပိုသငျယူထားခွငျးက ဥာဏျရညျမွငျ့လာစပွေီး စကားပွောပိုသှကျစတေယျဆိုတာ သိပ်ပံနညျးကရြှာဖှတှေရှေိ့ထားပွီးသားဖွဈသလို အားလုံးလညျးသိပွီးသားဖွဈမှာပါ! 🔸သငျရော ဘာသာစကားဘယျနှဈမြိုး တတျမွောကျထားပွီလဲ? အခုလို တိုးတကျပွောငျးလဲလာတဲ့ခတျေကွီးမှာ Computer နဲ့ English certificate တှရှေိရုံနဲ့တငျ လစာကောငျးကောငျးရဖို့ မလှယျတော့ပါဘူး။ ဘာသာစကား ၂မြိုးလောကျ နဲ့ Diploma တှထေပျယူထားမှပဲ ဝငျငှမြေားမြားရပွီး သူမြားထကျသာနမှောပါ။ အရငျကတော့ လုပျငနျးခှငျသုံးအင်ျဂလိပျစာပဲ လလေ့ာထားရငျရပွီဆိုပမေယျ့ ခုနောကျပိုငျး မွနျမာနိုငျငံမှာ တရုတျကုမ်ပဏီတှမြေားလာတာ အားလုံးလညျးသတိထားမိကွမှာပါ။ ဒါကွောငျ့အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးတှပေိုကောငျးဖို့၊ နိုငျငံရပျခွားနဲ့ စီးပှါးရေးကူးသနျးရောငျးဝယျဖို့အတှကျ တရုတျဘာသာစကားက အခွခေံလောကျကိုတနေ့တျကိုတတျထားရမယျ့ ဘာသာစကားတဈခုပါ။ 🎖️တရုတျစာတတျသှားရငျ ဘာတှထေူးမှာလဲ? -လကျရှိအလုပျ/စီးပှါးရေးက တရုတျကုမ်ပဏီတှနေဲ့ဆကျစပျနရေတယျဆိုရငျတော့ အခွခေံစကားပွောလောကျကိုမဖွဈမနတေတျထားမှ ကိုယျ့အတှကျအခှငျ့အလမျးမြားမှာပါ။ -အားလပျခြိနျတှမှော တရုတျဘာသာစကားနဲ့ပတျသတျတဲ့ freelance အလုပျတှလေုပျပွီး အပိုဝငျငှရှောလို့ရမယျ (video subtitle ထိုးခွငျး, စကားပွနျ, စာအုပျဘာသာပွနျ) -ကမ်ဘာပတျပွီးခရီးထှကျဖို့ဆန်ဒရှိရငျ နိုငျငံတိုငျးမှာ China town(တရုတျတနျး)ဆိုတာအမွဲရှိလို့ ဘယျကိုပဲသှားသှား တရုတျစကားကအသုံးဝငျပါတယျ။ 🔸ဘယျသူတှတေကျသငျ့လဲ? ဒီအခွခေံတရုတျစာသငျတနျးLevel-1မှာ ဗညျြး၊ သရ (က ၊ခ) ကနစေပွီးအခွခေိုငျအောငျ စနဈတကနြညျးမှနျလမျးမှနျသငျကွားပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ လုံးဝအခွခေံမသိတဲ့သူတှေ၊ အခွခေံသိတယျ ထိထိရောငျရောကျတိုးတကျခငျြတဲ့သူတှေ၊ လုပျငနျးခှငျမှာအသုံးခရြတော့မယျ့သူတှေ တကျရောကျသငျ့ပါတယျ။ 🔸အှနျလိုငျးသငျတနျးဆိုတော့ ဘယျလို သငျကွားမလဲ? - Facebook secret group ကနေ သငျကွားသှားပါမယျ။ - အပတျစဥျ တနင်ျလာနေ့ ညနေ (၆) နာရီတိုငျး Unit (၁) ခုတငျပေးသှားမှာဖွဈပွီး တဈပတျအတှငျး ကိုယျအဆငျပွတေဲ့ အခြိနျမှာ သငျခနျးစာတှကေို သငျယူလလေ့ာလို့ ရမှာပါ။ - (၂) ပတျတဈခါ သငျကွားသညျ့ ဆရာ၊ ဆရာမမြားက Live လှငျ့ပွီး သငျခနျးစာမြားကို revision ပွနျပေးမညျဖွဈပါသညျ။ 🔸သငျကွားမညျ့သူ - Daw Thi Dar Mon BA. Bachelor of Arts in Chinese Language(YUFL) သငျတနျးကွေး - ၇၈,၀၀၀ ကပျြ သငျတနျးစမညျ့ရကျ - နိုဝငျဘာ (၃) ရကျနေ့ သငျတနျးကာလ - (၁)လခှဲ *သငျတနျးသားဦးရကေနျ့သတျထားပါတယျ* သငျတနျးကိုစိတျဝငျစားတယျဆိုရငျ Comment မှာ “Chinese" လို့ရေးခဲ့ပေးပါ၊ Chance Myanmarကနအေမွနျဆုံးဆကျသှယျလိုကျပါမယျ🙏 --------*--------- Zawgyi version တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ လူသုံးအများဆုံး ဘာသာစကားက အင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ? နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဘာသာစကားသုံးစွဲတဲ့လူဦးရေပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲထားတဲ့စာရင်းအရဆိုရင် 1. တရုတ် (1.1 ဘီလီယံ) 2. အင်္ဂလိပ် (983 မီလီယံ) 3. ဟိန္ဒူ (544 မီလီယံ) 4. စပိန် (537 မီလီယံ) 5. အာရေဗစ် (422 မီလီယံ) တို့က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လူအများဆုံးသုံးနေကြတဲ့ဘာသာစကားတွေပါ။ ဒါ့အပြင် ဘာသာစကားတစ်မျိုးပိုသင်ယူထားခြင်းက ဥာဏ်ရည်မြင့်လာစေပြီး စကားပြောပိုသွက်စေတယ်ဆိုတာ သိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးသားဖြစ်သလို အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ! 🔸သင်ရော ဘာသာစကားဘယ်နှစ်မျိုး တတ်မြောက်ထားပြီလဲ? အခုလို တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ Computer နဲ့ English certificate တွေရှိရုံနဲ့တင် လစာကောင်းကောင်းရဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ဘာသာစကား ၂မျိုးလောက် နဲ့ Diploma တွေထပ်ယူထားမှပဲ ဝင်ငွေများများရပြီး သူများထက်သာနေမှာပါ။ အရင်ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်သုံးအင်္ဂလိပ်စာပဲ လေ့လာထားရင်ရပြီဆိုပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေများလာတာ အားလုံးလည်းသတိထားမိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပိုကောင်းဖို့၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ စီးပွါးရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ဖို့အတွက် တရုတ်ဘာသာစကားက အခြေခံလောက်ကိုတေ့နတ်ကိုတတ်ထားရမယ့် ဘာသာစကားတစ်ခုပါ။ 🎖️တရုတ်စာတတ်သွားရင် ဘာတွေထူးမှာလဲ? -လက်ရှိအလုပ်/စီးပွါးရေးက တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆက်စပ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ အခြေခံစကားပြောလောက်ကိုမဖြစ်မနေတတ်ထားမှ ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အလမ်းများမှာပါ။ -အားလပ်ချိန်တွေမှာ တရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ freelance အလုပ်တွေလုပ်ပြီး အပိုဝင်ငွေရှာလို့ရမယ် (video subtitle ထိုးခြင်း, စကားပြန်, စာအုပ်ဘာသာပြန်) -ကမ္ဘာပတ်ပြီးခရီးထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိရင် နိုင်ငံတိုင်းမှာ China town(တရုတ်တန်း)ဆိုတာအမြဲရှိလို့ ဘယ်ကိုပဲသွားသွား တရုတ်စကားကအသုံးဝင်ပါတယ်။ 🔸ဘယ်သူတွေတက်သင့်လဲ? ဒီအခြေခံတရုတ်စာသင်တန်းမှာ ဗျည်း၊ သရ (က ၊ခ) ကနေစပြီးအခြေခိုင်အောင် စနစ်တကျနည်းမှန်လမ်းမှန်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုံးဝအခြေခံမသိတဲ့သူတွေ၊ အခြေခံသိတယ် ထိထိရောင်ရောက်တိုးတက်ချင်တဲ့သူတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးချရတော့မယ့်သူတွေ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။ 🔸အွန်လိုင်းသင်တန်းဆိုတော့ ဘယ်လို သင်ကြားမလဲ? - Facebook secret group ကနေ သင်ကြားသွားပါမယ်။ - အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ ညနေ (၆) နာရီတိုင်း Unit (၁) ခုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်မှာ သင်ခန်းစာတွေကို သင်ယူလေ့လာလို့ ရမှာပါ။ - (၂) ပတ်တစ်ခါ သင်ကြားသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများက Live လွှင့်ပြီး သင်ခန်းစာများကို revision ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 🔸သင်ကြားမည့်သူ - Daw Thi Dar Mon BA. Bachelor of Arts in Chinese Language(YUFL) သင်တန်းကြေး - ၇၈,၀၀၀ ကျပ် သင်တန်းစမည့်ရက် - နိုဝင်ဘာ (၃) ရက်နေ့ သင်တန်းကာလ - (၁)လခွဲ *သင်တန်းသားဦးရေကန့်သတ်ထားပါတယ်* သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Comment မှာ “Chinese" လို့ရေးခဲ့ပေးပါ၊ Chance Myanmarကနေအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်🙏
✌ SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS: https://bit.ly/2L95vfh 🍅 TAKE THIS COOKING CLASS: → Contact Three Good Spoons here: https://www.threegoodspoons.com/ **This video was not sponsored by Three Good Spoons. We took this class on our own and genuinely loved the experience! ✅ CONNECT WITH US → Blog: https://www.theurbanveg.com → Instagram: https://www.instagram.com/theurbanveg → Facebook: https://www.facebook.com/theurbanveg → Email: caryn@theurbanveg.com 📷 CAMERA GEAR WE USE → Canon M6 Camera (Main Camera): https://amzn.to/2Km3uZE → Canon G7X Camera (Vlog Camera): https://amzn.to/2N1RWMV → Canon EOS R (Photography): https://amzn.to/2FgymfY → 11-22mm Canon Wide Angle Lens: https://amzn.to/2tEQlUt → 35mm Canon MACRO Lens: https://amzn.to/2x9QVeu → 60mm Canon MACRO Lens: https://amzn.to/2p0gJpK → Canon EOS M Mount Adaptor: https://amzn.to/2tHYfMZ → Tripod: https://amzn.to/2yOMHxa 🎤 AUDIO GEAR WE USE → Mic for EOS M6: https://amzn.to/2yNLSo5 → Mic for Voiceover recording: https://amzn.to/2LOzr1F → Digital Hand Recorder Zoom H4N: https://amzn.to/2O5pp92
"လွယ်ကူ လေ့လာ Idioms များ" အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ကို တက်သင့်/မတက်သင့်ဝေခွဲရခက်နေရင် ဒီvideoကိုကြည့်ပါ 🔎 ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်အောင်ပါနော်🙏 “ ဒီvideo က Level-1 ရဲ့သင်ခန်းစာvideo(60) ထဲက တစ်ခုပါ! ------------------------------------------- " သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးမယ့် Chance Myanmar ရဲ့ အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း " 👩🏻‍🎓 အင်္ဂလိပ် speaking and Listening ကို အသက်အရွယ်မရွေး၊ပညာအရည်အချင်းမရွေး၊ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲ ထိထိရောက်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Online English Class Level 1 (Batch-5) ကို စက်တင်ဘာ(၂၅) ရက်နေ့စဖွင့်ပါပြီ 🔸Level 1 မှာသင်ကြားပေးမှာက •အင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကစပြီးစနစ်တကျလေ့လာရန် •ဝေါဟာရများကိုကြွယ်ဝစွာအသုံးချနိုင်ရန် •အခြေခံအင်္ဂလိပ် speaking နှင့် listening ပိုင်နိုင်ရန် •အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ပြင်ပဗဟုသုတတွေအပြင် နိုင်ငံခြားသွားချင်တဲ့သူတွေနိုင်ငံရပ်ခြားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းအစဉ်အလာအကြောင်း အသေးစိတ် (အသက်အရွယ်မရွေး၊နေရာဒေမရွေး၊ ပညာအရည်းအချင်းမရွေး တက်လို့ရအောင်အခြေခံကနေ သင်ကြားပေးပါတယ်) 🔸Level2မှာသင်ကြားပေးမှာက • phonetic -အသံထွက် ကိုအသေးစိတ် စနစ်တကျ နားလည်ရန် • speaking နှင့် listening စွမ်းရည် ပိုမို တိုးတက်စေရန် • နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောများကို ယုံကြည်မှုရှိ ရှိနှင့် အသံထွက်မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောဆိုနိုင်ရန် Level နှစ်ခုလုံးမှာ ပါဝင်မယ့်အရာတွေကတော့ - သင်ခန်းစာ video ပေါင်း(၇၀) - Live လွှင့်ပြီး Revision ပြန်လည်သင်ကြားခြင်း - လေ့ကျင့်စရာ exerciseများ - အထွေထွေဗဟုသုတများ - သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းတက်ဖို့အတွက် မလိုအပ်တာတွေက ❌ဘွဲ့ ❌အသက်အရွယ် ❌နေရာဒေသ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေက ✅ ပြင်းပြတဲ့ကြိုးစားလိုစိတ် ✅ WiFi or Mobile data ✅ ရုံးချိန်/ကျောင်းချိန်မဟုတ်တဲ့ အားလပ်ချိန်များ 🔸သင်ကြားမည့်သူများ- Yaw Mang B. Ed (Eng) University of St. La Salle, Bacolod city, Philippines M. Ed (Curriculum and Instruction), Assumption University, Thailand Hay Mar Nwe @ Maynine B.A.(English), Diploma in English Langauge Teaching and Methodology(YUOE), M.A.(TEFL) (Candidate) သင်တန်းစမည့်ရက် - စက်တင်ဘာ(၂၅)ရက်နေ့ သင်တန်းကာလ - (၂) လ သင်တန်းကြေး - ၇၈,၀၀၀ ကျပ် * လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါတယ် * လက်ရှိ Batch(4) တက်နေတဲ့သူတွေရဲ့Feedbacks တွေကို ဒီpost ရဲ့comment မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်👇 https://www.facebook.com/1393065990733143/posts/2507519555954442/ အခု Level-1 batch(5) အပ်ရင်းနဲ့ Level-2 တစ်ခါတည်းအပ်ထားရင် မူရင်း- 78000+78000= 156,000 အစား Package အထူးဈေးနှုန်း 130,000 နဲ့တက်ခွင့် ရပါမယ်✅
This is the information covered in our 5/4 class.
Profitable Basic Forex Course Online Class now in Myanmar
Class in Yangon, Myanmar
Best IELTS Class in Myanmar
Chinese Class Chance Myanmar
Vegan Burmese Cooking Class | Traditional Shan Cooking in Yangon, Myanmar 🌿
Chance Myanmar Online English Class Level 1
Myanmar Telling Time-Branch Course
Are you Planning to study abroad? Wall Street English cares about you. Trusting WSE isasurefire way to improve your English skills in the shortest amount of time. AT WSE, You will study in Encounter Classes with our internationally certified native English speaking teachers. No more missing classes. Our Flexible Scheduling ensures that classes are offered when you are free and provides busy adults with the ability to adjust their classes to their schedule. At Wall Street English, we design all of our facilities with modern multimedia outlets and staff them with English speakers who will make you feel as if you are in the modern english speaking world. We care about you as an individual learner and believe small class sizes contribute toastudent's success. All of our classes have ...
တဈကမ်ဘာလုံးမှာ လူသုံးအမြားဆုံး ဘာသာစကားက အင်ျဂလိပျစာမဟုတျဘူးဆိုရငျ ဘာဖွဈမလဲ? နိုငျငံတိုငျးမှာ ဘာသာစကားသုံးစှဲတဲ့လူဦးရပေျေါမူတညျပွီး ခှဲထားတဲ့စာရငျးအရဆိုရငျ 1. တရုတျ (1.1 ဘီလီယံ) 2. အင်ျဂလိပျ (983 မီလီယံ) 3. ဟိန်ဒူ (544 မီလီယံ) 4. စပိနျ (537 မီလီယံ) 5. အာရဗေဈ (422 မီလီယံ) တို့က ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ လူအမြားဆုံးသုံးနကွေတဲ့ဘာသာစကားတှပေါ။ ဒါ့အပွငျ ဘာသာစကားတဈမြိုးပိုသငျယူထားခွငျးက ဥာဏျရညျမွငျ့လာစပွေီး စကားပွောပိုသှကျစတေယျဆိုတာ သိပ်ပံနညျးကရြှာဖှတှေရှေိ့ထားပွီးသားဖွဈသလို အားလုံးလညျးသိပွီးသားဖွဈမှာပါ! 🔸သငျရော ဘာသာစကားဘယျနှဈမြိုး တတျမွောကျထားပွီလဲ? အခုလို တိုးတကျပွောငျးလဲလာတဲ့ခတျေကွီးမှာ Computer နဲ့ English certificate တှရှေိရုံနဲ့တငျ လစာကောငျးကောငျးရဖို့ မလှယျတော့ပါဘူး။ ဘာသာစကား ၂မြိုးလောကျ နဲ့ Diploma တှထေပျယူထားမှပဲ ဝငျငှမြေားမြားရပွီး သူမြားထကျသာနမှောပါ။ အရငျကတော့ လုပျငနျးခှငျသုံးအင်ျဂလိပျစာ...
✌ SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS: https://bit.ly/2L95vfh 🍅 TAKE THIS COOKING CLASS: → Contact Three Good Spoons here: https://www.threegoodspoons.com/ **This video was not sponsored by Three Good Spoons. We took this class on our own and genuinely loved the experience! ✅ CONNECT WITH US → Blog: https://www.theurbanveg.com → Instagram: https://www.instagram.com/theurbanveg → Facebook: https://www.facebook.com/theurbanveg → Email: caryn@theurbanveg.com 📷 CAMERA GEAR WE USE → Canon M6 Camera (Main Camera): https://amzn.to/2Km3uZE → Canon G7X Camera (Vlog Camera): https://amzn.to/2N1RWMV → Canon EOS R (Photography): https://amzn.to/2FgymfY → 11-22mm Canon Wide Angle Lens: https://amzn.to/2tEQlUt → 35mm Canon MACRO Lens: https://amzn.to/2x9QVeu → 60mm Canon MACRO Lens: https://amzn.to/2p0gJpK → C...
"လွယ်ကူ လေ့လာ Idioms များ" အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ကို တက်သင့်/မတက်သင့်ဝေခွဲရခက်နေရင် ဒီvideoကိုကြည့်ပါ 🔎 ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်အောင်ပါနော်🙏 “ ဒီvideo က Level-1 ရဲ့သင်ခန်းစာvideo(60) ထဲက တစ်ခုပါ! ------------------------------------------- " သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးမယ့် Chance Myanmar ရဲ့ အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း " 👩🏻‍🎓 အင်္ဂလိပ် speaking and Listening ကို အသက်အရွယ်မရွေး၊ပညာအရည်အချင်းမရွေး၊ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲ ထိထိရောက်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Online English Class Level 1 (Batch-5) ကို စက်တင်ဘာ(၂၅) ရက်နေ့စဖွင့်ပါပြီ 🔸Level 1 မှာသင်ကြားပေးမှာက •အင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကစပြီးစနစ်တကျလေ့လာရန် •ဝေါဟာရများကိုကြွယ်ဝစွာအသုံးချနိုင်ရန် •အခြေခံအင်္ဂလိပ် speaking နှင့် listening ပိုင်နိုင်ရန် •အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ပြင်ပဗဟုသုတတွေအပြင် နိုင်ငံခြားသွားချ...
အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မည့် Forex Trade တစ်ခုကို ဘယ်လိုရအောင်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာ ဒီသင်တန်းမှာ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနယ်ဝေးကနေ Forex Trade ကို မြန်မာဘာသာနဲ့လေ့လာလိုသူများ...
Are you Planning to study abroad? Wall Street English cares about you. Trusting WSE isasurefire way to improve your English skills in the shortest amount of ...
တဈကမ်ဘာလုံးမှာ လူသုံးအမြားဆုံး ဘာသာစကားက အင်ျဂလိပျစာမဟုတျဘူးဆိုရငျ ဘာဖွဈမလဲ? နိုငျငံတိုငျးမှာ ဘာသာစကားသုံးစှဲတဲ့လူဦးရပေျေါမူတညျပွီး ခှဲထားတဲ့စာရငျးအရဆိုရငျ 1....
✌ SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS: https://bit.ly/2L95vfh 🍅 TAKE THIS COOKING CLASS: → Contact Three Good Spoons here: https://www.threegoodspoons.com/ **This video ...
"လွယ်ကူ လေ့လာ Idioms များ" အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ကို တက်သင့်/မတက်သင့်ဝေခွဲရခက်နေရင် ဒီvideoကိုကြည့်ပါ 🔎 ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်အောင်ပါနော်🙏 “ ဒ...
အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မည့် Forex Trade တစ်ခုကို ဘယ်လိုရအောင်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာ ဒီသင်တန်းမှာ လေ့လ...
Are you Planning to study abroad? Wall Street English cares about you. Trusting WSE isa...
တဈကမ်ဘာလုံးမှာ လူသုံးအမြားဆုံး ဘာသာစကားက အင်ျဂလိပျစာမဟုတျဘူးဆိုရငျ ဘာဖွဈမလဲ? နိုငျငံတိုင...
✌ SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS: https://bit.ly/2L95vfh 🍅 TAKE THIS COOKING CLASS: → Contact ...
"လွယ်ကူ လေ့လာ Idioms များ" အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ကို တက်သင့်/မတက်သင့်ဝေခွဲရခက်နေရင် ...
Profitable Basic Forex Course Online Class now in ...
Class in Yangon, Myanmar...
Best IELTS Class in Myanmar...
Chinese Class Chance Myanmar...
Vegan Burmese Cooking Class | Traditional Shan Coo...
Chance Myanmar Online English Class Level 1...
Myanmar Telling Time-Branch Course...